नजिक न्युज | ॐ लेखि सेयर गरौं ! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला !
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।भिडियो हेर्नुहोस सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
आखिर के हो त शिवलिं’ग ?शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो ।स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं’ग हो भनिएको छ ।र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन । वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् ।हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।
भिडियो हेर्नुहोस। त्यसैले शिवलिं’गको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ,।भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बिहिबार १९, चैत २०७७ ०८:५४ मा प्रकाशित